Ngabe usakhathazekile ngokungawutholi umshini wokusika ofanele? NgoMeyi kulo nyaka, inkampani yethu i-jiahao yaklama umshini omusha wokusika uphethiloli, onesitayela sokuklama sesimanje esiyingqayizivele, esingathinta umbono wakho. I-JH350 petroli disc Cutter isika kalula ukhonkolo, itshe, isitini, nokugandaywa, Nge ...
Ngo-3: 30 ntambama ngo-Agasti 7, 2020, inkampani yethu yabamba ingqungquthela enkulu yomkhiqizo omkhulu maphakathi nendlunkulu yaseYongkang. Amabhizinisi aqhamuka embonini yezingxenyekazi zekhompyutha amenywe ngokukhethekile ukuba abe yingqungquthela. Ngaphansi kokuzilungiselela ngokucophelela, inkampani yethu ikhombise ukubhidlizwa kagesi kwe-JH-168A 2200W ...
Okthoba 20, iYongkang imishini ne-Hardware Expo yabanjelwa e-Yongkang International Convention and Exhibition Center. Lo mbukiso ubukhombisa ikakhulukazi imboni yehadiwe nemishini. Ngalo mbukiso, inkampani yethu ikhombise imikhiqizo yethu kumakhasimende, futhi ngokuxhumana okukhona, sisebenza ngokubambisana ...